कोरोना भाइरस: अरुलाई धोखा-चिनलाई मौका ! – खोज केन्द्र
» ब्लग » स्वास्थ्य अंक: 3066
कोरोना भाइरस: अरुलाई धोखा-चिनलाई मौका !
खोज केन्द्र सोमबार, चैत्र १७, २०७६ मा प्रकाशित
विचार (श्याम यादव )
कोरोना भाइरस संसारको लागी धोखा र चिनको लागी मौका साबित हुँदै छ्न ।
अहिले संसारको एक तिहाई देश लकडाउनको चपेटामा छ्न ।
इटली, स्पेन र अमेरिका क्रमश १,२ र ३ नम्बरमा को संक्रमित देशमा पर्द्छ तर कोरोना भाइरस वुहान शहर बाट फैलिएको थियो । अहिले बिस्तारै-बिस्तारै चिनमा सबै कुरा समान्य हुँदै छ्न ।
यहाँ प्रश्न खडा हुन्छ? के यो भाइरस चिनको नंया चाल हो? या वास्तविकता हो !
यहाँ धेरै प्रश्नहरु चिनमाथी उठ्न थालेका छ्न । खासगरी चिनको wireless कम्पनीले सार्वजनिक गरेको डाटा अनुसार ३ महिनामा लाखौं सिम र ल्याण्डलाईन disconnect भएका छ्न । त्यो आक्डाको अनुसार चिनमा लाखौं मानिसहरु कोरोना भाइरसको कारण आफ्नो ज्यान गुमाएका छ्न । तर चिनले सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार सबै थोक समान्य हुँदै छ्न । चिनको मिडियाहरु पनि सरकारकै कव्जामा छन ।
डा. आइअफेनका अनुसार यो भाइरस लाई सुरु देखि नै चीन सरकार लुकाउने प्रयास गर्दै छ्न । अहिले हरेक देश या त दोधारमा छ्न या त लकडाउनमा छ्न । यसको जिम्मेवार चीन सरकार छ्न ।
अहिले चीन संसारमा आफ्नो पहिचान सृजना गर्न आफ्नो doctor इटली र स्पेन पठाइ रहेका छ्न । WHO का अनुसार यो भाइरस महामारी घोषणा भैसकेका छन र संसार भरी संक्रमित को संख्या आधा मिलियन पुगी सकेका छ्न । मृत्यु हुने संख्या पनि २२ हजार भन्दा बढी पुगी सकेका छ्न ।
यो घटना बाट चीन र अमेरिका को सम्बन्ध पनि चिसिएका छ्न । वास्तविकता बाट सबै अन्जान छ्न, किनभने चिनमा यो भाइरस नियन्त्रण हुनुको मतलव यसको उपचार पता लागीसकेको हुनुपर्छ । यदि यस्तो छैन भने यो विश्वलाई त्रसाउने र आर्थिक मन्दी ल्याउने चिनको चाल हो ।